Fanaraha-maso ny fametahana bilaogy: ny mpanazatra ny bilaogiko avy amin'i Shonnie Lavender | Martech Zone
Asabotsy Jolay 21, 2007 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Vao haingana aho no nanome toro-hevitra bilaogy amin'i Shonnie Lavender ho an'ny bilaoginy mahafinaritra, My Blog Coach. Nandray am-po ilay torohevitra i Shonnie ary nanomboka niasa avy hatrany nanatanteraka ny sasany tamin'ireo fanovana. Ny tena mahavariana dia ny lohateny pejy ao amin'ny bilaoginy.
Ity ny sary lohan'ny lohateny 'Talohan'izany':
Ity ny sary 'Aorian'ny' lohateny:
Antenaina fa ho hitanao ny manasa ny sary vaovao! Oay! Fanovana inona izany. Sariaka ny sary ary manasa ary ny sonia dia manampy kilasy fanampiny. Ny atiny Shonnie dia efa tampony - ity layout vaovao ity dia tena mpinamana kokoa. Bilaogera maro no mangovitra amin'ny fametrahana ny sarin'izy ireo ao amin'ny bilaogin'izy ireo. Tadidio fa tsy ho anao ny sary! Ho an'ny olona izay mifandray aminao amin'ny alàlan'ny bilaoginao!
Asa tsara Shonnie! Azafady mba avereno jerena ny fahombiazan'ny fitomboanao!
Raha te hitifitra ny bilaoginao ianao dia fantaro ny momba ahy Lahatsoratra fametahana bilaogy.
Clicky Web Analytics indray no manao azy!
21 Jul 2007 amin'ny 7:15 PM
Tena fanatsarana tokoa izany. Ary izao koa aho hanova ny typeface ho milamina kokoa, tsotra.